FOTOTRA IJOROANA | Malagasy Miara-Miainga
IREO FOTOTRA IJOROAN’NY MALAGASY MIARA-MIAINGA
Ny fihodinana voalohany teo amin’ny fifidianana izay ho Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, narahin’ny fifidiananaizay ho solombavam-bahoaka ao amin’ny Antenimieram-pirenena dia nanasongadina ny fipoirana hery mitondra hevi-baovao eo amin’ny sehatra politika malagasy ka naharesy lahatra olona maro be manerana ny Nosy, dia ny hetsiky ny Vondrona Politika Miara-dia sy ny Malagasy Miara-Miainga. Antony telo loha no nahatonga izany:
Tao aloha ilay hetaheta, iombonan’ny rehetra, ny amin’ny tokony hisian’ny “tena fiovana” amin’izay, ka hialana tanteraka ireo fomba fanaovana politika nahazatra hataramin’izay;
Fatao ihany koa ny fanentanana ireo olom-pirenena hanangana Repoblika vanona, mba hisian’ny fampandrosoana mirindra any amin’ireo Faritra rehetra tsy ankanavaka maneranany Nosy mba hivelaran’ny fiainan’ny isambatan’olona;
Ary fahatelo dia tsapa ny fahavononana sy ny finihavana, mihandahy mihambavy,indrindra fa ireo tanora hirotsaka amin’ny asa fanovana ifotony ny Firenena ka handraisana an-tananany ho avin’izy ireo izay mbola tadiavin’ny olom-bitsy, tsy mitsinjo hafa tsy ny tombontsoany, ho gejaina.
Ireto avy no anisan’ireo fototra maha-resy lahatra ny Malagasy Miara-Miainga fa tokony hiaingana:
Ny fiverenana amin’ny tany tan-dalàna
Ny fitondrana demokratika sy ara-drariny
Ny firindran’ny fampandrosoana maharitra isam-paritra itsinjaram-pahefana
Ny fanangonana hovory lanina ireo antoka rehetra entinamampadroso ny toekarena mba hisian’ny fahatsaram-piainana be be kokoa hatrany
FANAJANAN’NY OLOM-PIRENENA REHETRA, IREO ANDRIM-PANJAKANA MISY, IREO MPITONDRA ISAN’AMBARATONGA NY LALANA VELONA
Fepetra tsy azo ihodivirana ny fakatoavan’ny Mpitondra ireo lalàna velona. Manome hasina sy dikany ary lanjany ny fanaovana politika hoan’ny tombontsoam-pirenena izany. Tsy hisy intsony ny “Tsy maty manota”. Eo ambanin’ny lalàna avokoa ny rehetra na ny Mpitondra na ny Vahoaka entina.
Ny fanomezana hasinany Fanjakana tan-dalàna dia tsy maintsy hatomboka amin’ny fanadiovana sy fanarenana ny Fitsarana. Haverina indray ny fitokisan’ny olom-pirenenany Fitsarana tsy miangatra eoamin’ny Fireneny raha tiana ny hanova ifotony ny Fanjakanai ray manontolo. Randran-tarihina avy amin’izany koa ny fanadiovana ireo Andrim-panjakana rehetra
FANOVANA IFOTONY NY FANJAKANA MBA HISIAN’NY FITONDRANA DEMOKRATIKA ARA-DRARINY
Ny fanovana ifotony dia miainga avy any amin’ny Kaomina, mandalo amin’ny Distrika sy ny Faritra ary tafapaka hatrany amin’ny Fitondrana foibe mba hirindran’ny lamina politika. Rehefa izany, ny Fanjakana dia miantoka manontolo ny tombontsoa iombonana ary manana adidy ihany koa hamerina ny fifampitokisana eo amin’ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina, ary indrindra eo amin’ny fampanjariana ny filaminana sy ny fandriampahalemana, fananganana ireo fotodrafitr’asa sy ny fahasalamam-bahoaka izay tafiditra ao amin’ilay antsoina hoe “Asam-panjakana”.
Noho izany, hatsaraina sy hatao hentitra ary matotra kokoa ny fitondrana:
Hovana sy hahitsy ny fitondran-draharaha eo amin’ny sehatra sahanin’ny fanjakana ka hatao mangarahara avokoa na ny fitantanana ny volam-panjakana na ny fanatanterahana ireo tolotr’asa samihafa (Passation de Marchés publics)
Lanjalanjaina tsara mba hifanaraka sy hirindra amin’ny tombontsoam-pirenena ny fahaleovantena sy ny fisarahan’ireo Andrim-panjakana
Vakiana ny ady amin’ny kolikoly amin’ny endriny rehetra ka hapetraka ho filamatra eo amin’ny isan’androm-piainana ny fitsipim-pitondrantena mandàla ny fahamarinana sy ny mangarahara. Ireo no manome aina ny fomba fitondrana demokratika. Hatsaraina sy hamaroana isa ireo rafitra fanaraha-maso ny fitondrana isan’ambaratonga.
Hanampy be dia be amin’ny fanatsarana ny fitondrana ny fanjakana ny fankatoavana ireo fifanarahanairaisam-pirenena sy ny fampiharana izany eto amin’ny tany sy ny firenena toy izay misy any amin’ireo tany mandroso rehetra. Anisan’izany ny fampiroboroboana ny miralenta, ny fiarovana ny zon’ny ankizy, ny fampiharana ireo fifanarahanairaisam-pirenena mikasika ireo sembana, na dia mety hifanohitra amin’ireo kolontsaina sy fomba amam-panao sasantsasany aza izany.
FANAMAFISANA NY FITSINJARAM-PAHEFANA ISAM-PARITRA IZAY ANTOKY NY FAMPANDROSOANA MAHARITRA SY NY FANDRIAMPAHALEMANA
Ny fitantanana ny raharaham-panjakana dia mifototra sy miainga amin’ny isam-paritra. Ny Malagasy Miara-Miainga dia resy lahatra fa izany no endriky ny demokrasia mifanentana amin’ny firafitry ny fiarahamonina Malagasy izay tiana hampandrosoana. Ny firindran’io fampandrosoana isam-paritra io no miantoka ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana maharitra.Ny fahombiazan’ny politika rehetra aroso dia miankina amin’io. Ny vondrom-bahoaka isam-paritra no mamaritra sy manentana ary mampihatra,arakaraka ny zava-misy any aminy,ireo tetika fampandrosoana.
FAMPANDROSOANA ARA-TOEKARENA IFAMPIZARANA ARA-DRARINY AMIN’NY REHETRA
Ny andraikitry ny Fanjakana dia ny mametraka lamina hampiroboroboana:
Ny hetsika sy ny finihavan’ny isam-batan’olona hikaroka sy hamorona asam-pivelomana sy fandraharahana ankalalahana ary tsy ho voaelingelina;
Ny mampitombo ny fampiasam-bola avy amin’ireo Mpandraharahatera-tany sy vahiny
Ny fandrindrana ny fifandraisana eo amin’izy ireo mba samy hahazo tombontsoa avy amin’izany; torak’izany koa ny fifandraisan’ny Fanjakana amin’ny sehatra tsy miankina
Ny fampandraisana anjara ireo vahoaka any amin’ny faritra amin’ireo tetikasa atao any;
Ny fanamafisana ny fifampitokisana eo amin’ireo mpandraraha ara-toekarena sy ireo mpitondra fanjakana isan-tokony sy isan’ambaratonga
Ny fiantohana ny aina sy ny fananan’ny olona.
Noho izany dia ifarimbonana ka iaraha-manana sy iaraha-misalahy amin’ny Fanjakanafoibe, ny vondrom-bahoaka isam-paritra, ny sehatra tsy miankina ary amin’ny fiarahamonim-pirenena ny vinam-pampandrosoana. Raha ilaina, ny fitondrana foibe dia hamatsy ara-pitaovana, araka olona ary koa ara-bola an’izany fampandrosoana isam-paritra izany. Inoana ary azo antenaina fa hisy ny fihatsaram-piainana haterak’izany fampandrosoana ifampizarana ara-drariny izany ka ho foana ny zanak’iKalahafa.
Ho voalanjalanja ara-drariny ihany koa ny fitrandrahana ireo otrikarena voajanahary ka hifanandrify amin’ ny filàn’ny Mponina rehetra miaina amin’izao fotoana izao kanefa hitsinjo ny hoavin’ireo taranaka fara-mandimby.
NyMalagasy Miara-Miainga dia handresy lahatra,ary manainga ireo hery velona eto amin’ny firenena mba hanomezana lanja manokana ny“FAHAIZA-MANAO MALAGASY” (Genie national). Antso hatao amin’ny rehetra tsy misy ankanavaka izany ary hatao lohalaharam-pamehana.Tsy azo ekena intsony, toy izay lasa izay,ny fanaovana zinona ny fahaiza-manao Malaga sy mba hanarenana ny firenena haingana.
Tsy ho voaovantsika hatrany ifotony ity firenentsikai ty raha tsy mivondrona isika, ka tsy hiankin-doha foana amin’ireo vahiny; tsy hisy izany fampandrosoana ifampizarana ara-drariny izany raha tsy ny MALAGASY rehetra no MIARA-MIAINGA. Ndao raisina ny fanamby mba tsy hitsanga-menatra ireo taranaka fara-mandimby.
Malagasy Miara-Miainga © 2014 - 2017
Tél. : +261 34 96 833 94
Lot II H 41 M Ankadindramamy Ankerana